Inguqu ezinzileyo yeQt 6.0 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqu ezinzileyo yeQt 6.0 sele ikhutshiwe
Emva kweenyanga ezininzi zophuhliso kunye neenguqulelo ezininzi zolingo, Inkampani yeQt isungule isebe elizinzileyo leQt 6, equka utshintsho olukhulu kulwakhiwo.
Inguqulelo entsha ithi iyahambelana Windows 10, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8.1+, OpenSuSE 15.1+), iOS 13+ kunye ne-Android (API 23+) zamaqonga.
Ezona zinto ziphambili zintsha ze-QT 6
Kwizinto ezintsha eziphambili ezikhankanyiweyo kwaye basebenza kuzo, enye yazo yi-API yemizobo engafakwanga exhomekeke kwi-3D API inkqubo yokwenza. Icandelo eliphambili lomatshini wemizobo weQt omtsha yindawo yokubonelela ngeenjini ezisebenzisa umaleko weRHI (Ukunikezela ngesixhobo soLwazi lweHardware). ukubonelela ngezicelo ze-Qt ezikhawulezayo kungekuphela nge-OpenGL, kodwa nakwiVulkan, Metal kunye ne-3D APIs ngqo.
Icacisiwe Imodyuli ye-Qt ekhawulezileyo ye-3D ene-API yokwenza ujongano lomsebenzisi isekwe kwi-Qt ekhawulezayo, idibanisa i-2D kunye ne-3D graphic elements. I-Qt ekhawulezileyo ye-3D ikuvumela ukuba usebenzise i-QML ukuchaza izinto zomdibaniso we-3D ngaphandle kokusebenzisa ifomathi ye-UIP. Kwi-Qt ekhawulezileyo ye-3D ye-2D kunye ne-3D, ungasebenzisa ixesha lokubaleka (i-Qt ekhawulezileyo), uyilo lomfanekiso, kunye nefreyimu yoopopayi, kwaye usebenzise iQt Design Studio yophuhliso lokujongana nokubonakalayo.
Imodyuli isombulula iingxaki ezinje ngobunzima bokudibanisa i-QML kunye ne-Qt 3D okanye umxholo we-3D Studio, kwaye ibonelela ngokwazi ukungqamanisa oopopayi benqanaba lesakhelo kunye notshintsho phakathi kwe2D kunye ne3D.
Enye into entsha Ukulungiswa ngokutsha kwekhowudi lwenziwa ngolwaphulo kwiindawo ezincinci kwaye ukunciphisa ubungakanani bemveliso esisiseko. Izixhobo zomphuhlisi kunye nezinto zesiko ngoku ziyafumaneka njengezongezo ngeNdawo yeNtengiso yeQt.
Kwelinye icala, sinokuyifumana loo nto injini yoyilo kunye nezikhumba ziyabandakanywa Umanyene ukufezekisa inkangeleko kunye nokuziva kweewadi zewijethi zeQt kunye nezicelo ezikwi-Qt ezikhawulezayo kumaqonga ohlukeneyo eselfowuni kunye nedesktop.
I-Qt ekhawulezayo ye-6 yongeza inkxaso kwi-MacOS kunye neewindows izitayile (Inkxaso yohlobo lweMathiriyeli kunye neFusion izitayile ze-Android kunye neLinux yaphunyezwa kwi-Qt5). Ukuphunyezwa kwesitayile sendabuko se-iOS kulindeleke ukuba kuphume i-Qt elandelayo.
Ukusebenza kwenkxaso yeqonga ebelibonelelwe ngaphambili yiQtX11Extras, QtWinExtras, kunye neemodyuli zeQtMacExtras zihanjisiwe zaya kumaqonga athile ee-API afumaneka ngqo kwi-Qt.
Isixhobo sezixhobo I-CMake isetyenziswa njengenkqubo yokwakha endaweni yeQMake. Inkxaso yokwakha usetyenziso lweQMake igcinwa, kodwa iQt ngoku yakhiwe kusetyenziswa iCMake.
Kwakhona, itshintshiwe ngexesha lokuphuhliswa komgangatho we-C ++ 17 (ngaphambili i-C ++ 98 yayisetyenziswa kunye ne-Qt 5.7-C ++ 11) kunye nesakhono sokusebenzisa ikhowudi ye-C ++ eminye yemisebenzi enikezelwa nge-QML kunye ne-Qt ekhawulezileyo yongezwa. Oku kubandakanya inkqubo entsha yepropathi yeQObject kunye neeklasi ezifanayo.
Injini idityanisiwe ukuze isebenze namakhonkco avela kwiQML kwi Qt kernel, ekuvumela ukuba wehlise umthwalo kunye nokusetyenziswa kwememori kwiikhonkco kwaye uzenze zifumaneke kuwo onke amalungu eQt, hayi iQt ngokukhawuleza nje.
Ukudityaniswa kwezakhiwo zedatha, eziphindiweyo kwiQObject kunye neQML (iya kunciphisa ukusetyenziswa kwememori kunye nokukhawulezisa ukuqala).
Thintela ukuveliswa kolwakhiwo lwedatha ngexesha lokubaleka uxhasa ukuveliswa kwexesha lokudityaniswa.
Fihla izinto zangaphakathi ngokusebenzisa iipropathi zabucala kunye neendlela.
Ukuphuculwa kokudityaniswa kwezixhobo zophuhliso lokuhlanganisa ixesha kunye nokuchongwa kwe-bug.
Izixhobo zongezwe ukuphatha ixesha lokudibanisa izixhobo ezinxulumene nemizobo, njengokuguqula imifanekiso yePNG ukuba icinezelwe okanye ukuguqula izithambisi kunye nemessage kwizibinari ezilungiselelwe izixhobo ezithile.
Inkxaso eyandisiweyo yeelwimi ezongezelelweyo ezinje ngePython kunye neWebhu yokuSebenza.
Ukuphathwa kwentambo kunye nokuphathwa kwe-Unicode kuphuculwe kakhulu.
Iiklasi zeQList kunye neQVector zidityanisiwe, iklasi yesishwankathelo esiphumo sisebenzisa imodeli yesikhongozelo seQVector.
Ekugqibeleni, kulindeleke ukuba ifikelele kumlinganiso kunye ne-Qt 5 kwiinkqubo zenkxaso Ngexesha lokwenyani kuhlobo lweQt 6.2.
Ukukhutshwa okubalulekileyo okulandelayo kweQt 6.1 kulindeleke ngo-Epreli kunye ne-Qt 6.2 LTS ngoSeptemba 2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » Inguqu ezinzileyo yeQt 6.0 sele ikhutshiwe
IVivaldi 3.5 ifika kunye nokuphuculwa kweetab, yabelana nge-url ngeQR nangaphezulu
IPython 3.9, uyifaka njani le nguqulo kwi-Ubuntu 20.04